राष्ट्रिय संयोजक, राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलन–२०७३
प्रथम उपाध्यक्ष, टुर्गान
नुवाकोट जिल्ला पञ्चकन्य गाविस वडा नं. ७ कात्तिकेमा २०२८ सालमा जन्मिनुभएका तामाङले टुरिष्ट गाइड एसोसिएशन अफ नेपाल (टुर्गान)का प्रथम उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ । सन् 1996देखि निरन्तर पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय तामाङ अंगे्रजी, फ्रान्स र जर्मनी भाषामा दख्खल राख्नुहुन्छ । उहाँले राजनीति शास्त्र र कल्चरमा स्नाकोत्तर गर्नुभएको छ । इमान्दार अनि सालिन व्यक्तित्वको धनी तामाङ आफ्नो पेशा व्यवसायको अलावा समाज सेवामासमेत विगत लामो समयदेखि तल्लिन हुनुहुन्छ । टुर्गानको कार्यसमिति सदस्य हुँदै प्रथम उपाध्यक्षको पदीय हैसियतमा पुग्नुभएका तामाङ टुर्गानले आउँदो असार २१ ग्तेको दिन काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको दोस्रो राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलनको राष्ट्रिय संयोजक भएर काम गरिरहनुभएको छ । प्रस्तुत छ उनै तामाङसँग दोस्रो राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलनको तयारी तथा नेपालका टुरिष्ट गाइडहरुको अवस्था तथा पर्यटन क्षेत्रका समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर पत्रकार प्रकाश खालिङले गरेको कुराकानीको अंशः
राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलन किन ?
साढे ९ सय टुरिष्ट गाइडहरुको संस्था टुर्गानले दोस्रो राष्ट्रिय टुर गाइड सम्मेलन गर्दैछ । यसलाई देशैभरीका टुर गाइडहरुको महान पर्वको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । यो सम्मेलन नेपालका टुरिष्ट गाइडहरुले झेल्नुपरेका नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याहरुको पहिचान गरी समाधानको लागि पहल गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो । सम्मेलनमार्फत टुरिष्ट गाइडहरुको पेशागत हक अधिकारको विषयमा व्यापक छलफल बहस गर्नुका साथै दीर्घकालिन योजना तर्जुमा गरिने छ । तसर्थ, यो सम्मेलनले टुरिष्ट गाइडहरुको पेशालाई सम्मानित पेशाको रुपमा परिणत गरी यसको गरिमा र प्रतिष्ठालाई अभिबृद्धि गर्दै मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनमा योग्दान पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।
सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य चाँही के हो ?
राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलनको उद्देश्य मुख्यतय तीन वटा छन् । पहिलो उद्देश्यभ नेको पछिल्लो विभिन्न कारण मुलुकको पर्यटनबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेको अनर्गल प्रचारबाजीलाई न्यूनिकरण गर्दै नेपालको पर्यटनबारे सकारात्मक सन्देश प्रवहा गर्ने हो । त्यसपछि दोस्रो टुरिष्ट गाइड पेशालाई सम्मानित तुल्याउनको लागि सामुहिक पहल गर्ने र तेस्रो टुरिष्ट गाइडहरुको छाता संगठन टुर्गानलाई समयसापेक्षित गतिशिल बनाउनको लागि आर्थिक पक्ष सवल बनाउने हो । यी तीन उद्देश्यभित्र मुलकको सिंगो पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासको सवालहरु कुनै न कुनै रुपमा जोडिन्छन् भन्ने लाग्छ ।
सम्मेलनमा खास के हुन्छ ?
सम्मेलन भनेको सबैको विचार पोख्ने एउटा साझा फोरम हो । यहाँ हरेक टुरिष्ट गाइडहरुको अनुभूतिका साथै सल्लाह, सुझावका साथै विचार विमर्ष हुनेछ । खासगरी यो सम्मेलनमा दीगो पर्यटनका लागि व्यवसायिक दक्षता भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर बहस गरिनेछ । जसको लागि विज्ञहरुबाट सुरुमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ र त्यसलाई फ्लोरमा लगेर व्यापक छलफल गरी एउटा निचोड निकालिन्छ । जुन निचोडलाई दस्तावेजिकीकरण गर्दै कार्यान्वयनका निम्ति सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गरिने छ ।
सम्मेलनको फ्रेमवर्क चाही कस्तो हुन्छ बताइदिनुस् ?
सम्मेलन दुई चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा आन्तरिक रुपमा सम्मेलनको सुरुवात हुन्छ । जसको अध्यक्षता टुर्गानका अध्यक्षज्युले गर्नुहुनेछ । यसै सेशनमा विज्ञहरुबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ र कार्यपत्रमाथि व्यापक बहस हुन्छ । त्यससँगसँगै टुर्गान कार्यसमितिले तय गरेको टुर्गान राष्ट्रिय परिषद तथा विभिन्न विभागहरुको औपचारिक घोषणा गरिनेछ ।
दोस्रो चरणमा अर्को कार्यक्रम हुनेछ । जुन कार्यक्रम संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा हुनेछ । पर्यटन सचिव, पर्यटन बोर्डका प्रतिनिधिहरु, पर्यटन सम्बद्ध सरोकारवालाहरु, टान, नाट्टा, हानलगायत सबै पर्यटकीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु, पर्यटन क्षेत्रका हस्तीहरु, पर्यटन व्यवसायीहरु, कुटनीतिक नियोग, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरु, पर्यटन पत्रकारहरुको व्यापक सहभागिता रहने उक्त कार्यक्रममा पहिलो चरणको आन्तरिक बहसबाट निस्किएको निचोड सार्वजनिक गरिने छ । त्यसपछि सम्बन्धित सबैको धारणा सुन्ने र सुनाउने तथा मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका निम्ति अन्तक्र्रियात्मक बहस हुनेछ ।
यही अवसरमा संस्थाको एसोसिएट सदस्यता प्रदान गर्नुका साथै विभिन्न तवरबाट संस्थाको बृद्धिविकासमा योग्दान पु¥याउने व्यक्तित्वहरुलाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम राखिने छ ।
सम्मेलनको लागि तयारी कहाँ पुग्यो ?
मलाई संयोजकको भूमिका दिइसकेपछि सम्मेलनलाई सभ्य र भव्य रुपमा सम्पन्न गर्नको लागि हामीले आन्तरिक गृहकार्य तीब्र बनाएका छौं । अहिलेसम्मको अवस्थामा करिब ७० प्रतिशत काम सकिएको छ । आर्थिक संकलनदेखि केही बाँकी तयारीको काम धमाधम भइरहेको छ ।
आर्थिक पक्षको व्यवस्थापन चाही कसरी गरिरहनुभएको छ ?
कुनैपनि कार्यक्रमको सफलताका निम्ति आर्थिक पक्षको ठूलो भूमिका हुन्छ । यो कुरालाई आत्मसाथ गर्दै हामीले आर्थिक पक्षमा अझ बढि जोड दिइरहेका छौं । अहिलेसम्म हामीले पर्यटक सेवा प्रदायक कम्पनीहरु, संघसंस्था तथा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिव्यक्तित्वहरुलाई आर्थिक सहयोगको लागि आह्वान गरिरहेका छौं । र धेरैले सहयोग पनि गरिरहनुभएको छ । संयोजकको हैसियतले कुनै न कुनै रुपमा टुर्गानप्रति सदभाव राख्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।